မေးလို့ ရတယ်နော်။ မဝယ်လည်းရတယ် “
” ငါ့ ညီ .. အကိုက ဟိုဆိုင်မှာ ပုံကူးမလို့ လာတာ “
” ဒီအကို လိုချင်တာလိုက်ပြပေးလိုက် “
” ဆရာ! ဘတ်ဂျက် ဘယ်လောက်သုံးမှာလည်း “
၂ ယောက် အတင်းဝင်မေးခိုင်းတာ အားနာလွန်းလို့ဝင်လာမေးကြည့် တာ :D :D :D “
” အဆင်ပြေသလား ဆရာ! “
အထဲမှာ ကျန်ခဲ့ တဲ့ ကောင်ကတော့ပွစိပွစိ! :D